संस्करण 0.2.8 – CSS sprites
जुलाई 19, 2009 द्वारा Ofer एक टिप्पणी छोड्नुहोस्
नयाँ संस्करण CSS sprites लागि प्रयोगात्मक समर्थन भन्छन्. यो पृष्ठ लोड समय कम (लागू गर्दा) र गुगलको पृष्ठ गति र याहू गरेको Yslow स्कोर सुधार. जो सिर्जना गर्न sprites एक आवश्यकता फिट गर्न अनुमति दिन्छ फिर्ता अन्तमा कोड को एक सेट पनि छ (तपाईं मात्र छ झण्डा र छैन भने 40, किन एक 12K छवि प्रयोग?). यो अझै उपलब्ध छैन – तर हामी कुनै सही फाइलहरू दिन सक्छ तिनीहरूलाई जो आवश्यकता, बस हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् वा यो पोस्ट मा टिप्पणी. हामी पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु MAREK Fiser अनुमति जो हामीलाई अब बेकारी blank.gif छुटकारा प्राप्त गर्न CSS आफ्नो सहयोगको लागि, मात्र होइन CSS फाइलहरू तर पनि अनुवाद इन्टरफेस मा.
केही त्रुटिहरू यस संस्करणमा तय थिए, समस्या गर्न livewriter प्रयोग गरेर विजेट मा मूल भाषा फर्केपछि लिएर, परिवर्तन लग यहाँ आफ्नो मित्र हो.
अर्को अनुरोध – हाम्रो Trac प्रयोग कृपया (trac.transposh.org) त्रुटिहरू फाइल, यो हामीलाई मदत गर्छ (र तपाईं) त्रुटिहरू प्रगतिमा राम्रो प्रतिक्रियाहरू र ट्रयाकिङ प्राप्त, र पनि हामीलाई नक्कली काम जोगिन गर्न अनुमति दिन्छ.
हामी तपाईं यस जारी मन पराउनुहुनेछ आशा.
न्यून दायर: विज्ञप्ति घोषणा संग Tagged: CSS sprites, झण्डा sprites, लघु, जारी, WordPress प्लगइन
आ CSS sprites
जुलाई 9, 2009 द्वारा Ofer3प्रतिकृयाहरु
अर्को संस्करण, जो अर्को हप्ता को अन्त मा आउँदै छ झन्डा विजेट CSS sprites लागि समर्थन समावेश गरिनेछ. यो वेब सर्भर गरिएका गति र अनुरोध संख्या को मामला मा लाभ. कोड यस साइटमा सक्रिय पहिले देखि नै छ र हामी तपाईं हामीलाई तपाईं ग्राहक पक्षमा सामना कुनै पनि मुद्दा को थाहा छ कि सराहना गर्नेछन् (गैर मानक ब्राउजर – IE6 को, आदि).
एक स्पिन लागि कोड लिन भनेर चाहनुहुन्छ जो कोहीले, पूर्व-विज्ञप्ति कोड प्राप्त गर्न हामीलाई सम्पर्क गर्न अधिक स्वागत गरेको छ.
न्यून दायर: सामान्य संदेश संग Tagged: CSS sprites, झण्डा sprites